New Zealand: Sheekoonyinka halyaynimada ah ee ka soo baxaya weerrarkii Masaajidda - BBC News Somali
18 Maarso 2019
Sheekooyin halyaynimo ah ayaa ka soo baxaya weerarkii Jimcihii lagu qaaday labada masaajid ee ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, halkaas oo 50 ruux ay ku dhinteen dad kale oo badanna lagu dhaawacay.
Ninka laga shakisan yahay ayaa waxyaabo qarxa ku watay gaadhigiisa wuxuuna qorshaynayay weerarro dheeri ah sida ay sheegtay Ra'iisulwasaare Jacinda Ardern.
Weerarkaas ayay ku tilmaantay "mid argagixisanimo". Galinka dambe ee Isniintana golaheeda wasiirrada ayaa gorfayn doona wax ka badalidda shuruuxda qoryaha ee dalkaas.
Baareyaasha ayaa baaritaan ku samaynaya maydadka oo loo celinayo qaraabada si loo aaso Arbacada.
Dadka dhintay ayaa loo tacsiyeeyay walina waxaa isbitaalka ku jira 34 ruux oo ay ka mid tahay gabadh afar jir ah oo xaaladdeedu aad u liidato.
Cabdulcasiis oo ah 48 jir reer Afhanistan ah ayaa sheegay in uu ku jiray gudaha masaajidka Linwood oo ahaa goobtii labaad ee la bartilmaameedsaday, isla markaasna uu maqlay in qof uu rasaas furay.
"Markuu arkay in aan qori wato, qorigii uu watay ayuu tuuray dhanka gaarigiisii ayuuna u orday. Waana eryaday" ayuu yiri Cabdulcasiis oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters.
Image caption Cabdulcasiis ayaa sheegay in uu mashiin yar ku tuuray ninkii weerarka soo qaaday
Askartu waxay wax walba ka hor mariyeen New Zealand," geesinimadoodana waan aqoonsan doonnaa ayay tiri Ra'iisulwasaare Arder, oo Sabtidii hadashay.
"Waxaa jira tiro goobjoogeyaal ah oo sheegay in walaalkii uu dad badbaadiyay intii uu isku dayayay in uu ka hor tago ninkii weerarka soo qaaday" sida uu BBC u sheegay walaalkii Khurshid Alam.
Ra'iisulwasaaraha Pakistan Imran Khan ayaana sheegay in la maamuusi doono Rashiid.
"Waan ku faraxsannahay waxay samaysay. Wanaag iyadoo samaynaysa ayay dhimatay. Waxay dhimatay iyadoo gacanta ku haysta wixii ay jeclayd een anna jeclaa," ayuu yiri Farid oo la hadlay BBC.
"Xaaskaygii ayaan waayay laakiin ma necbi ninkii dilay. Shaqsiyan waan jeclay. "Waana cafiyay. Waana u ducaynayaa." ayuu intaas ku sii daray.
Talaadada ayuu baarlamaanku ka tacsiyayn doonaa dadka dhintay. Dadka kale oo geeridooda la xaqiijiyay waxaa ka mid ah:
Atta Elayyan oo ah 33 jir reer Kuwayd ah oo gool haye ka ahaa New Zealand.
Khaled Mustafa oo ahaa qaxooti ka yimid colaadda Suuriya
Sayyad Milne oo ahaa 14 jir doonayay in uu ciyaartoy kubbadeed noqdo marka uu waynaado.
Brenton Tarrant oo ah ninka weerarkan "argagixisada ah" gaystay ayaa Sabtidii maxkamad ka soo muuqday isaga oo gacmaha ka jeebaysan oo qaba dharka maxaabiista, kaameerada markii uu arkay ayuuna qoslay. Waxaa lagu soo oogay hal dacwad oo dil ah, waxaana la filayaa in ay dacwado dheeri ah lagu soo oogi doono.
Kaligii ayaa lagu soo oogay toogashada waxaana la rumaysan yahay in aysan cidina wehelin, sida uu sheegay taliye Bush.